7000 tapitrisa ny olombelona eto an-tany : iza no hamelona izany rehetra izany? – Malag@sy Miray
Mitombo isan’ora isan-tsegontra ny isan’ny olombelona eto ambonin’ny tany. Raha ny fanisana natao farany dia voalaza fa 6700 tapitrisa isika no mameno ity tany ity. Voakajikajy tsotsotra tamin’izany fa mety ho 8300 tapitrisa eo izany isa izany afaka 20 taona.
Haingana be dia tonga izany fe-potoana izany. Amin’izao fotoana mantsy dia voalaza fa 20 tapitrisa ny mponina eto Madagasikara ka ny ampahafolony no mipetraka eto An-drenivohitra. Raha ny isa voaray tamin’ny fanisana natao farany dia voalaza va 16 tapitrisa ny isan’ny mponina eto amin’ity nosy malalantsika ity ka raha mitombo 3% isan-taona izany mandritra ny taona maromaro dia izay no nahazoana io 20 tapitrisa io.
Amin’izao fotoana izao dia somary takona ao ambadiky ny krizy ara-bola sy ara-toe-karena ny krizy ara-tsakafo misy manerana ny tany. Hita tsy mahavelon-tena koa isika malagasy raha mba nihambo hahavita tena ara-tsakafo tamin’ny fotoan’androny. Nefa isika dia nikasa ny hanondrana ny ambim-bava any Azia sy Eropa ary Amerika. Misy ihany ny vary tsara aondrana satria afaka amidy lafo mba ahafahana manafatra vary mora vidy avy any Sina saingy mbola tsy dia izay loatra no tokony hitondrana azy.
Vietnam, Pakistan, Sina, samy manondrana vokatra aty Afrika. Madagasikara nefa akaiky kokoa an’i Afrika, maro ny tany mbola tsy voajary afaka manao izany ka inona no andrasana?
Afaka mamelona in-5 avo heny ny mponina ao aminy i Madagasikara, miankina amin’ny fambolena ny fiharian’ny mponina maro ao aminy kanefa mbola manafatra sakafo ihany. Fa maninona ?
Satria ho avy ny andro tsy hisy tany azo ambolena intsony any ampita ka ny an’ny Gasy no nde halaina izay efa nanomboka moa (Daewoo). Ampidirina moramora ao an-dohan’ny Gasy fa tsy ampy sakafo izy, mahantra izy, ka mila ampiana @ fambolena sns nefa isika no tena hanampy ireo vazaha ireo.Mila mailo !
22 juillet 2009 à 7:36
Marina izany fa tena mila mailo tokoa isika. Inona moa no misakana ny malagasy tsy hikarakara ny taniny fa ilàna izao vahiny rehtra izao? Tsy sanatria tsy fitiavana vahiny fa fanairana ny mpiray tanindrazana amin’izay afaka ataony.
Tsy mahay mamboly ve ny malagasy? Sa tsy mahay mikarakara ny taniny? sa tsy ampy vola sy fitaovana ary olona hanaovana izany amin’ny tokony ho izy?